I-Luxury Studio Suite 2, Emaphuzu amahlanu e-South @ UAB. - I-Airbnb
I-Luxury Studio Suite 2, Emaphuzu amahlanu e-South @ UAB.
Jabulela Ukuphila Komlando w/Amasevisi Osuku Lwesimanje. Itholakala e-Five Points South, ukuvimbela okukodwa kusuka e-UAB. Umklamo wangaphakathi wemibala enesibindi, emnyama, eqinile. Ilungele umuntu oyedwa noma ababili. Sebenza, Dlala, noma vele uhlale e-Birmingham.
Ifakwe ifenisha ngokuphelele yokuphila kwansuku zonke. Umbhede omkhulu uye walungisa kabusha isakhiwo esingu-1895 (unyaka owakhiwe) futhi wanezela amasevisi esimanje. Isistimu ye-air conditioning, eneyunithi yokugeleza kwefasitela, iphindaphindeka indlela umoya owawuselwa ngayo ezindaweni ezahlukene zendlu ngendlela eyimpumputhe yekamelo.
I-studio siyinhlanganisela yomlando kanye nobuchwepheshe besimanje.
1. Ikamelo lokulala linombhede omkhulu, imicamelo emibili, iwashi elinefoni ekhokhisa idokodo phezu kwefoni yakho ukuze ukhokhise i-smart phone. Kukhona i-inthanethi exhonywe odongeni ene-cable ne-Netflix.
2. Uzothola ikhishi eliphelele elinosinki owodwa, i-1-cook top, i-1-oven, i-1-micriwave, i-Kurig eyi-1, ifriji, izitsha, amanzi, ijusi ye-Apple, i-V8, nokudla okulula. Kunerekhi yokomisa ngaphansi kosinki wezitsha.
3. Ubhavu wethu ugcwele amathawula ngokuphelele, izindwangu zokugeza, i-shampoo, i-conditioner, insipho, iphepha lasendlini yangasese, ububanzi.
4. Ihhovisi linedeski eligcwele, isihlalo sasehhovisi, i-resliner enokukhanya kokufunda.
5. Uzothola i-plug access aprox. wonke amafidi angu-8 kuyo yonke i-studio.
6. Kukhona iziteshi ezishajayo neziteshi zokugcina izimpahla endaweni ngayinye yokuhlala kuyo yonke i-studio sethu.
7. Izindawo zaphansi zinekhaphethi nezinkuni eziqinile. Amaragi endawo emahlathini aqinile.
I-HDTV engu-48" ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Amazon Prime Video, I-Netflix
4.91 · 291 okushiwo abanye
Le ndawo yase-Birminghamis inokuthula nokuzola kakhulu.